Budata Pixel Super Heroes APK maka Android
Budata Pixel Super Heroes
Free Budata maka Android (50.00 MB)
Budata Pixel Super Heroes,
Pixel Super Heroes bụ egwuregwu nka enwere ike igwu na mbadamba na ekwentị nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Nime egwuregwu a ebe ị gosipụtara nkà gị dị egwu, ị ga-anọchi anya agwa ndị ị na-arọ nrọ mgbe niile.
Ị na ndị dike na-egwu egwu na Pixel Super Heroes. Negwuregwu ahụ, nke gụnyere ndị dike nke anyị niile chọrọ ịbụ noge anyị bụ nwata, anyị na-arụ ọrụ dị iche iche site niji dochie ndị dike. Ị ghaghị ikpochapụ ndị iro na-eyi ụwa egwu ma gosipụta onwe gị. Ị ga-anakọta ndị dike niile ma jiri ha zọpụta ụwa na egwu. Akara aka nke ndi mmadu di naka gi. Mgbe ị na-eji eserese ụdị retro na-egwu egwuregwu ahụ, ị ​​ga-enwekwa agụụ. Nweta nnukwu ego dịka o kwere mee site na iji dike wee jikere ịbụ dike na-esote. Egwuregwu ahụ, nke nwere nkata na-eri ahụ, na-atọkwa ụtọ nke ukwuu. Ọ ga-ekwe omume ịkọwa Pixel Super Heroes dị ka egwuregwu na-agba ọsọ nke dike.
Akụkụ nke Egwuregwu;
Eserese ụdị ochie.
Ndị dike dị iche iche.
Ụdị egwuregwu dị mfe.
Ụdị ndekọ akpaaka.
Ikike ime asọmpi.
Ị nwere ike budata egwuregwu Pixel Super Heroes nefu na mbadamba na ekwentị gam akporo gị.
Pixel Super Heroes Ụdịdị
Nha faịlụ: 50.00 MB
Mmepụta: LYTO MOBI